Luis Suarez oo TAALO looga taagay dalkiisa Uruguay iyo taageerayaasha oo ku camirtay….+SAWIRRO – Gool FM
Kooxaha Napoli iyo Barcelona oo bar-bardhac ku kala baxay kulankii lugta hore wareega 16-ka UCL…+SAWIRRO
Bayern Munich oo Stamford Bridge guul weyn kaga soo gaartay Chelsea kulankii lugta hore wareega 16-ka UCL…+SAWIRRO
Guardiola oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Man City ee ka qeyb galaya kulanka Real Madrid… (Miyuu ku jiraa Sterling?)
Shaxda rasmiga ah kulanka Napoli iyo Barcelona ee tartanka Champions League oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka Chelsea iyo Bayern München ee tartanka Champions League oo la shaaciyay
Zidane oo ku tilmaamay Guardiola inuu yahay midka adduunka ugu fiican, isaga oo sharaxay sababta
WARBIXIN: 8 Xiddig oo saameyn leh oo si dirqi ah kaga badbaaday dhimasho… (CR7, Neymar, Kaka iyo kuwa kale)
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Man City
Maxay ka dhigan tahay in Lionel Messi uu caawa wajahayo Kooxda Napoli?
Jamie Carragher oo tilmaamay xiddiga kaliya Yurub ka ciyaara ee ka fiican Maxamed Saalax
Luis Suarez oo TAALO looga taagay dalkiisa Uruguay iyo taageerayaasha oo ku camirtay….+SAWIRRO
Byare July 29, 2016
(Uruguay) 29 Luulyo 2016. Weeraryahanka Barcelona Luis Suarez ayaa TAALO lagu sharfayo looga taagay dalkiisa hooyo ee Uruguay laakiin taageerayaasha ayaa durba ka jeex jeexay oo ku sheegay inay tahay taalo fool xun.
Waxaa la xusuustaa in Taalo loo sameeyay kol hore Messi ay qabsatay baraha bulshada iyadoo lagu sheegayo inay tahay mid ka mid ah taalooyinkiii ugu foosha xumaa.
Hasayeeshee, Suarez ayaa u mahad celiyay qof kasta oo ku lug lahayd taalada lagu sharafayo oo looga taagay dalkiisa.
Ninka ay eeda inta badan ku soo biyo shubaneyso ee sameeyay taaladan Alberto Morales ayaa ku andacoonaya inuusan weligii la kulmin Suarez isla markaana uu taalada ka sameeyay uun isagoo fiirinaya sawiradiisa uu ka helay Internet-ka.
Paolo Maldini oo SADDEX bilood gadahood waayay Aabihii iyo hooyadii
SAWIRRO: AC Milan oo soo bandhigtay funaanaddeeda 3-aad ee 2016-17